रित्तियो मानवता : मृ,त्यु मिर्गौला फेलबाट भएपनि स्वास्थकर्मी भएकैले लाश उठाउन १ जनापनि आएन – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रित्तियो मानवता : मृ,त्यु मिर्गौला फेलबाट भएपनि स्वास्थकर्मी भएकैले लाश उठाउन १ जनापनि आएन
काठमाडौं । अहिलेको समयमा मान्छेहरु झन स्वार्थी हुँदैछन् । यो बीचमा अहिले बाहिर आएको एक घटनाले सबैलाई हैरान बनाएको छ । भारत, उत्तर प्रदेशको अलीगढमा श्रीमान्को मृत्युपछि श्रीमती एक्लैले अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको छ ।
मिर्गौला फेला भएका कारण श्रीमानको मृत्यु भएको जनाइएको छ । पत्नी सुलेखा आशा एक कामदार हुन् । घरमा तीन साना बच्चाहरु रहेका छन् । पतिको लाश घरमा राखिएको थियो । मृत्युको खबर पाए पनि कोही छिमेकबाट आएनन् ।
नजिकै बस्दै आएका ति युवकका भाई पनि आएनन् । के कारणले गर्दा, मानिसहरूले यस घरबाट दूरी बनाए त्यसको कारण झन डरलाग्दो रहेको छ । पतिको अन्त्येष्टि कस्तो हुनु पर्छ भन्दा भन्दै राति भैसकेको थियो ।
जब कोही पनि आएनन्, उनले स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरलाई बोलाइन् जहाँ आशा कार्यरत थिइन् । यो सुनेर डाक्टर थोरै मानिस लिएर उसको घरमा आइपुगेका हुन् । सबै व्यवस्था गरियो । तर श्रीमतीले पतिको चि’तालाई आ’गो दि’न इन्कार गरिन् ।
स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर र संस्थाको सहयोगमा सुलेखाका पतिको लाश दाहसंस्कारस्थल पुग्यो । आवश्यक अन्त्येष्टि सामग्री पनि संकलन गरियो । सबै तयारी भैसकेपछि अब प्रश्न आयो कसले आ’गो दि’ने ? त्यहाँ सुलेखाका न त आफन्त थिए न त कोही छिमेकी नै आएका थिए । सुलेखाको कुनै छोरा छैनन् । उनका तीन छोरीहरू मात्र रहेका छन् ।
त्यसपछि त्यहाँ भएका मानिसहरूले सुलेखालाई उनको श्रीमानको चि’तामा’थि आ’गो दि’न अनुरोध गरेका थिए । तर सुलेखाले इन्कार गरिन् । उनले भनिन्, ‘म कसरी प्रेम दिने प’तिलाई आ’गो दि’न स’क्छु ?’ जब त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूले उनलाई सम्झाए त्यसपछि उनी दा’गब’त्ती दिन तयार भइन् ।
सुलेखाले डाक्टरलाई फोनमा सबै कुरा बताउँदा डा. आशु सक्सेना अर्को आशा कार्यकर्ताको सहयोगमा थिए त्यसपछि उनी सुलेखाको घरमा पुगेका हुन् । सुरुमा, उनले छिमेकमा मानिसहरूलाई सम्झाए ।
यस पछि संगठनका अध्यक्ष उपकारले विष्णु कुमार बन्टीलाई फोनमा सबै कुरा बताए । संस्था अध्यक्षले तुरून्त कार र केही मानिसहरूलाई पठाए । लाश गाडीबाट दा’हसं’स्कारका लागि ल्याइएको थियो । सबै सामानहरू संकलन गरेर सुलेखाको पतिको अन्तिम संस्कार गरिएको हो ।
उनी अस्पतालमा काम गर्ने भएका कारण कोरोना संक्रमणको डरले कोही पनि नआएको हुनसक्ने जनाइएको छ । यसैले सोही अस्पतालका मानिसहरु आएर मात्र उनको अन्तिम संस्कार गरियो । यतिसम्मकी उनी स्वास्थ्यकर्मी भएकै कारण यसरी छेउमा नै आउँन नसक्नु समाजमा सचेतना नभएको डाक्टरहरुले दुखेसो गरे ।
दु’खद खबर : अन्ततः रहेनन क’न्चन,लाख कोसिस ग’र्दापनि बचा*उन स’किएन’
वाह गरेको अभियोगमा बेहुलाबेहुलीसहित आमाबुवा पxक्राxउ